Eyona nto iphambili ngoku yenoveli eSpain | Uncwadi lwangoku
Eyona nto iphambili ngoku yenoveli eSpain
UCarmen Guillen | | iintlobo, Inoveli
Nangona inoveli iguqukile ngokuhamba kwexesha njengakwezinye iintlobo zoncwadi ezinje ngemibongo kunye neqonga, i iindlela zamabali Kwikota yokugqibela yekhulu lama-XNUMX, eyathatha iipatheni zokubaliswa zakudala.
Nangona namhlanje kungelula ukuqonda imisinga yoyilo okanye izikolo kwingxelo entsha, sinokubona eyona nto iphambili ngoku eSpain. Singathetha ngezinye ezintlanu ezifanelekileyo kwaye emva koko sizinike amagama kwaye senze isishwankathelo esifutshane malunga nenye nganye yazo.
1 Imfihlakalo kunye / okanye inoveli yamabali
2 Inoveli yezembali
3 Inoveli yokucinga esondeleyo
4 Inoveli yeenkumbulo kunye nobungqina
5 Inoveli yezothando kunye nenkanuko
Imfihlakalo kunye / okanye inoveli yamabali
Uhlobo lwenzululwazi apho ubuqili kunye nemixholo yamapolisa kujongwana nazo zavuselelwa emva kweminyaka yama-90 eSpain. Phakathi kwabalimi bayo besizwe sinokuqaqambisa UManuel Vazquez Montalban ngubani odale umcuphi wabucala Pepe Carvalho; Kwakhona kwi UPererez-Reverte kunye neenoveli zakhe ezinkulu ezifana "UKumkanikazi waseMzantsi" epapashwe ngo-2002 okanye omnye weyona misebenzi yakhe idumileyo yangaphambili, Itheyibhile yeFlanders (1990) kunye «Iqela leDumas» (1992).
Ukuba siya kwii-90s kufuneka sigqamise imisebenzi enje "Igolide yamaphupha" de UJose Maria Merino, "Umqhekeki", epapashwe ngo-1998 nguMiguel Delibes okanye isaga edumileyo UCaptain Alatriste isethwe kwiSpanish Golden Age, ngumbhali okhankanywe apha ngasentla, UArturo Pérez-Reverte.
Kwaye kwiminyaka yakutshanje, uhlobo lwenoveli yezembali ephumeleleyo yile ichazwe ngokwamaxesha akufutshane anje ngemfazwe yamakhaya. Ukuba sithetha ngeli xesha singakhankanya imisebenzi ebalaseleyo njenge "Ilizwi lokulala" (2002) ka Chacon entle, "Amajoni aseSalamis" (2001) ka UJavier Cercas o «Igama lethu» (2004), ukusuka U-Lorenzo Silva. Eyokugqibela ithetha ngeemfazwe zase-Afrika kwii-20s.
Inoveli yokucinga esondeleyo
Ezi noveli zibonakaliswa ngaphezulu kwako konke ngophando lomntu kunye nokubonakaliswa kwemetaphysical kumava abo obomi kunye nobukho.
Baninzi ababhali abazinikeleyo emzimbeni nasemphefumlweni kolu hlobo loncwadi: UJuan Jose Millás nencwadi yakhe "Isiphithiphithi segama lakho", apho ukubonakaliswa kwengqondo kudityaniswa nokubonakaliswa koncwadi; UJulio Llamazares, kunye nencwadi yakhe "Imvula etyheli" (1988) apho kusenzeka into eyenzekayo namhlanje, njengokulahlwa okungapheliyo kwabantu.
Inoveli yeenkumbulo kunye nobungqina
Inkumbulo yesizukulwane kunye nokuzibophelela yimixholo esisiseko yale meko apho ababhali abanjengo URosa Montero apho athethelela imeko yobufazi kwincwadi yakhe "Ndiza kukuphatha njengendlovukazi" (amashumi alithoba anesibhozo ananye). Ikwaqaqambisa ULuis Mateo Dieznge "Umthombo wobudala" (1994) apho enza khona uhlalutyo loncwadi kunye oluhlekisayo lobomi bephondo.
Inoveli yezothando kunye nenkanuko
E-Spain, iminyaka yegolide yothando yayiphila ngenkulungwane ye-XNUMX. Okwangoku kukho ababhali abaxuba ukuthanda ezothando kunye neenkanuko kwiinoveli ezinabantu ababhinqileyo nabaselula. Singakhankanya kule meko yohlobo lwenoveli ukuya Elisabet Benavent, Eyaba ngumbulelo owaziwayo kakhulu kuyo Isisa seValeria kwaye unyaka nonyaka ebepapasha imisebenzi eneempawu ezifanayo nezokuqala.
Kwaye, yeyiphi kwezi ntsingiselo okanye iintlobo zinoveli oyifunda kakhulu? Ngaba ungasixelela ukuba yeyiphi incwadi oyithandayo kwezi zinto zichazwe apha?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Eyona nto iphambili ngoku yenoveli eSpain